Wararkii ugu dambeeyey ee shirka Muqdisho ka socda oo galay maalintii laabaad - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee shirka Muqdisho ka socda oo galay maalintii laabaad
Wararkii ugu dambeeyey ee shirka Muqdisho ka socda oo galay maalintii laabaad
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa weli ka socda shirka golaha wada-tashiga qaranka, kaas oo galay maalintiisii labaad oo xiriir ah.
Shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoominayo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble, halka ay goobjoog yihiin hoggaamiyeyaasha maamul goboleedka dalka iyo sidoo kale duqa Muqdisho, Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish).
Intiisa badan waxaa shirka diirada lagu saarayaa dardar-gelinta doorashada iyo wixii ka qabsoomay heshiiska 27-kii May lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa fadhiga maanta ee shirka ka socda Teedhanada Afisyooni warbixin looga dhageysan doonaa guddiga farsamada ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble.
Qaar ka mid ah qodobada qaar ee doorashada ayaa sidoo kale la’isku hayaa, waxaana xogta ku helnay in madaxda qaar maamul goboleedyada ay doonayaan in ergada lagu soo koobo 51, halka ay hadda ka yihiin 101, sida ku qoran heshiiskii doorashooyinka.
Dhankooda Cali Guudlaawe iyo Axmed Madoobe, ayaa taasi beddelkeed rabay in doorashada ay ka dhacdo oo kaliya magaalooyinka Jowhar iyo Kismaayo, iyada oo ay ku adag tahay inay ku qabtaan Beledweyne iyo Garbahaarey, sida ku cad heshiiska la gaaray 27-kii May ee sanadkan.
Si kastaba gabagabada shirkan ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro go’aanno wax ku ool ah oo lagu wajahayo qabsoomida doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Soomaaliya ayaa waxaa ku dheeraaday ka gudubka xaaladda guurka ah, taas oo sababtay in khilaaf xoog-leh uu ka dhasho doorashooyinka, walow haatan heshiis laga gaaray.